Iyo sintered mat yakagadzirwa ne micron diangle nonwovens, simbi uye yakakwirira kupisa sintered simbi nyuzi. Iyo yakawanda-dhaidhi simbi fiber mat inokwanisa kugadzira pore gradient kubva kune dzakasiyana pore layer, uye inokwanisa kudzora kusefera kunyatso uye kamwe-damba mat kusvibiswa.
Iyo inogona kuchengetedza maitiro ekutsvaira kweaya jira rekuenderera mberi, uye iine chimiro chetatu-chimiro-network, porous chimiro, yakakwirira porosity, yakakura nzvimbo nzvimbo, pore diimita uye yunifomu kugovera. Naizvozvo, isimbi isina tsvina yakanyatsonzwa inokurira zvikanganiso zvekuvhara kuri nyore uye kusagadzikana kwesimbi mesh. Iyo inoitira iyo brittleness uye diki kuyerera kwepoda kuchera zvigadzirwa, uye inogadzirisa tembiricha nekumanikidza kuramba hunhu hwemufaira pepa uye jira rekusefa. Naizvozvo, simbi isina sintered yakanzwa ine yakanakira kuseta mashandiro uye iri sarudzo yakakodzera yekudziya kwakanyanya kupisa, kusagadzikana kwemhepo nekupikisa kwakanyanya. Precision firita zvinhu.
1. Yakakura sewage kurapwa kugona, yakakwirira mafirita kururamisa, kupera kumanikidza kumuka uye refu kutsiva kutenderera
2. Inopesana ne nitric acid, alkali, organic solvent uye zvinodhaka kutu, uye inogona kushandiswa kwenguva yakareba pa600 ℃;
3. Yakakwirira porility, yakanaka permeability, kudzvinyirira kuderera kurasikirwa uye kuyerera kukuru;
4. Inodhinda, inowedzera nzvimbo yekuchera, uye inotambudza;
5. Inogona kucheneswa uye kugadzirwazve, uye inogona kushandiswa kazhinji.
Performance kutonga nzira:
Panyaya yekuita kwesimbi isingaiti simbi yakanzwa kuputira firita, kutanga kwezvose, iyo bubble point, mutsauko kumanikidza kuyerera hunhu, kunyatso uye tsvina vhoriyamu, simba, kuyerera kwemasimba simba uye axial mutoro simba inofanirwa kutariswa.
Iko kukosha kwekumanikidza kwekutanga bubble point yechinhu chefetera hakuzovi kwakaderera kupfuura 90% yehuwandu hwekudzvinyirira hwepakutanga bubble point yezvinhu zvemhepo.
Misiyano yekumanikidza kuyerera maitiro: kana iyo tembiricha yekushisa ingangoita 30 ° C, yakaganhurirwa kusiyanisa kumanikidzwa ndeye 0.15Mpa; kana iyo furu iri mhepo yakajairwa, iyo yakaganhurirwa kusiyanisa ichave 200Pa.
Kufanofunga chinhu chakakosha chisingaputi simbi yekupuruzira faira, inoona kuti inogona kuzadzisa chinangwa. Kana ichinge yakaverengerwa kuti dhizaini rakakwana zvakakwana, iko kuenderana kunoenderana nekuenderana kwehunyanzvi.
Pollutant zvemukati zvinoreva zvemukati wetsvina zvirimo. Mafirita anogona kuteedzera zvakasvibiswa, asi hazvigoni kubviswa zvakananga kubva kunzira. Zvinosvibisa zvinogona kungosara mucfaera. Iko kusvibisa kugona kwefaira yakaenzana nehuwandu hwekusvibisa pane yeyuniti nzvimbo uye nzvimbo yefaira. Icho chigadzirwa chechigadzirwa chine chekuita nekumanikidza kumusiyano mukushandiswa chaiko kwechinhu chechitsafa.